Tsy Tia Ahy ny Mpampianatra Anay | Tanora
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bichlamar Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Grika Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kiluba Kinyarwanda Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Norvezianina Ossète Papiamento (Curaçao) Poloney Portogey Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tamoul Tatar Tiorka Tiv Tseky Tsonga Télougou Umbundu Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Inona no Hataoko fa Tsy Tia Ahy ny Mpampianatra Anay?
Diniho ity ohatra ity. Tsara be foana ny naotin’i Rachel taloha. Rehefa nifindra kilasy anefa izy, dia nomen’ny mpampianatra azy naoty ratsy be foana. Hoy i Rachel: “ Fanahy iniany mihitsy ilay izy. ” Nasehon’ilay mpampianatra tamin’i Rachel sy ny mamany fa tsy tiany ny fivavahan’izy ireo.
Manampy hiampitana rano ny vato. Toy izany koa fa manampy anao hahay ny mpampianatra. Tsy maintsy miezaka miampita anefa ianao, izany hoe miezaka mianatra
Inona no nitranga avy eo? Hoy i Rachel: “ Nandeha niresaka taminy izahay sy mamanay isaky ny hitanay hoe tokony hahazo naoty tsara aho, nefa mbola nomeny naoty ratsy be ihany. Tsy sahy intsony izy tamin’ny farany. ”
Izany koa ve no mahazo anao? Miresaha amin’ny ray aman-dreninao. Azo antoka fa te hiresaka amin’ilay mpampianatra izy ireo, ary mety ho te hiresaka amin’ny tompon’andraikitra hafa koa mba hahitana vahaolana.
Tadidio fa tsy voatery hivaha foana ny olana. Tsy maintsy miaritra ianao indraindray. (Romanina 12:17, 18) Hoy i Tanya: “ Efa sendra mpampianatra ratsy toetra be aho. Tia manambanimbany ankizy izy. Nolazainy hoe vendrana izahay. Efa voany aho dia nitomany be, fa avy eo aho niezaka tsy hivaky loha. Ny fianarako no nataoko tsara. Tsy dia naninona ahy intsony izy, sady mba nomeny naoty tsara aho, nefa betsaka ny ankizy nahazo naoty ratsy. Voaroaka izy, roa taona tatỳ aoriana. ”
Fehiny: Mahaiza mamantatra an’izay tokony hatao rehefa sendra mpampianatra sarotiny. Hahasoa anao foana izany, satria mety ho sendra mpampiasa masiaka ianao any aoriana any. (1 Petera 2:18) Hahay hankasitraka an’ireo mpampianatra tsara fanahy koa ianao amin’izay.